Madda Walaabuu Press: Oromiyaan yoo walaboomte malee, furmaatni xumuraa Oromoof hin argamu
Erga Wayyaaneen biyya dhuunfattee asis, ammas yaadni biyyattii (Impaayarittii) sana diimookraatessuu jedhu bifa adda addaatiin mula’tee ammas projaktiin hin milkoofnee yaalamaa jira. Isaan kana keessaa inni tokko kaayyoo KFOn (OFC) qabatee ka’ee dha. Haa ta’u garuu, har’a maaltu mul’achaa jira? Hoggantootni KFO jumlaadhaan hidhamanii mana hidhaa keessatti dararamaa jiru. Oromoof bu’aan hin argamne.